Cooking lalao ho an'ny ankizivavy - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Iza no tia ny sakafo matsiro, ary tiany ny mahandro sakafo. Fa matsiro, Tsy midika calorie, satria maro ireo sakafo tsy ara-pahasalamana: Fandravana ny bika, ary mianatra bebe kokoa momba azy ireo dia hanampy anao maimaim-poana amin'ny aterineto lalao fandrahoan-tsakafo. Isaky ny andro tsy fiasana, ny olona sy ny zava-nitranga ny sakafo nentim-paharazana. Raha tsy tapaka milalao lalao fandrahoan-tsakafo, ianao maintsy mianatra be dia be ny mahaliana sy mahasoa. Tena be dia be ny salady, zava-pisotro, tsindrin-tsakafo, ny voalohany na ny faharoa antokony. Eto dia mahatakatra ny mahagaga fiovana ny manta sakafo ao amin'ny tsy manam-paharoa vilia, mianatra ny handravaka sy hanompo azy ao amin'ny filaharany marina.
na dia tena mbola tsy vita tantara an-tserasera lalao mahandro sakafo, ary ny kely ary te-hianatra bebe kokoa, mba hanomana ny lovia mbola untested. Misy kilalao dia tsotra ka dia manomboka ny hianatra fahaiza-manao fahaizana culinary Gamers, fa tsikelikely misy ny faniriana hanao tena sarotra fomba fahandro, milalao amin'ny sehatra maro sy ny asa samy hafa. Izahay vonona ny hihaona ny zavatra ilain'ny rehetra, maimaim-poana fanatitra dikan ny atsinanana, andrefana, Eoropeana nahandro, sakafo maro izay mitaky fomba manokana, karohy ny sakafo manokana sy ny sakafo hafakely.
Mba tsy miankina amin'ny hafa, dia manoro hevitra fa mahafehy ny lalao maimaim-poana amin'ny aterineto mpahandro. Eto nanangona isan-karazany ny lovia, ny fahitana fotsiny izay afaka hampiely salivating. Play azy ireo tokoa hampilendalenda fa te hanandrana sakafo unlearning virtoaly tsara tao an-dakozia. Misy maro ny andrana eo ambany fanaraha-mason'ny ambony chefs.
Delicious Emily ny Home Sweet Home
Vaovao Delicious Emily Fiandohana
Masha & Dash Masaka Fandroana
Masha Sy ny lalao zaza zaza
Lalao Fandroana an'ny mpanao pizza
Mofomamy amin'ny fampakaram-bady tonga lafatra
Cooking lohataona lohataona
Icing amin'ny mofomamy an-tserasera
Frozen Slushy Mpanamboatra
Sakafo mangatsiaka pisaka
Fanamby amin'ny sakafo mampihomehy
Sakafo fahandroana tsara indrindra eran-tany
Mpanamboatra gilasy aho
Fianarana lesona Koreana
ButterflyChocolateCake: Cooking Amin'ny Emma
Cake Pops vorontsiloza
By Noel Bush
Fivarotana mofo tsy misy masaka Strawberry
Mandrakotra ny fianakaviana virtoaly
Almond sy Apple cake
Cooking tamin'i Emma: sushi Rolls
Chef Tompon'ny Pizza
Sweet ovy henan'omby
Zazakely Taylor: Sakafo sakafo sinoa
Lalao Cooking tamin'ny Category:
Sarah ny Kitchen
Farany Cooking lalao
Ny sakaizako dia mampiala ahy sakafo maraina
Fetin'ny zazavavy japoney Taylor zazakely
Fetin'ny Fetin'ny Dite Taylor Baby
Master mofomamy fampakaram-bady 2
Frito Frito Fritozy
Italiana Pizza Truck
Mikarakara sakafo miaraka amin'i Emma Pizza Margherita
Mofomamy mofomamy mofomamy
Mimis Comfy Cooking
Tompon-tsakafo amin'ny arabe
Burgeria an'i Papa
Fanamby mahandro amin'ny mpivady
Lalao Online Rehetra Cooking lalao ho an'ny ankizivavy
Cooking dia kanto!
Mba hanomanana ny sakafo matsiro ao amin'ny tontolo virtoaly culinary-boly, dia tsy maintsy mazava tsara manaraka fomba fanamboarana sy mitandrina ny filaharan'ireo dingana ao aminy. Ny famoronana Chef Mizara ho ambaratonga samy hafa ny be pitsiny. Izahay milalao amin'ny endriny tsotra ity lalao ity mahandro dia sasao ny lovia, handravaka ny lovia sy manompo azy isika ho amin'ny latabatra izany tamin'ny fotoana sy ny fomba izany fahazoan-dalana hiditra antsika hanao ny solosaina. Ohatra, raha ilaina toy izany koa manendasa kilalao sôkôla Chip mofomamy, ny singa ireo dia ho hita tsirairay amin'ny latabatra an-dakozia, ary ianao ihany no tokony tsindrio eo amin'ny azy ny totozy.
Ary manomboka amin'ny rehetra ny koba - koba tsara toto, yaorta, siramamy, kakao, ary ny atody no fanangona azy any amin'ny fitoeran-diloilo, dia afangaro izany rehetra izany angady. Ny mpilalao dia tsy maintsy mazava tsara hihazona ny totozy eo amin'ny drafitra ny faribolana ao amin'ny vilia baolina, ary mamerina izany im-betsaka tamin'ny lalana samy hafa mba araka ny tokony ho mametafeta ny koba. Noho ny Rolling sady niteti lasitra koa dia mila hanao ny kitondro ny zana-tsipìka no nanondro: a Rolling Pin mba handroaka ny ankavia-tsara sy miakatra-midina ho lasa vongan ny koba ho fisaka mofo, tsindrio eo amin'ny faritra samihafa eo amin'ny fisaka shortcake mba hanasongadinana ny endriky ny mofomamy ao. Rehefa tapitra ny banga izany dia apetraka amin'ny fanendasa-mofo sy vonona Nitarina amin'ny lovia tsara tarehy.
hafa lalao manomana sakafo
Ny kely sarotra kokoa ny asa, rehefa ho avy ny sakafo ho an'ny sakafo mila hahafantaranareo ny tenanareo ao amin'ny vata fampangatsiahana na toeram cupboard. Ve Gamers Manana lisitra ho an'ny fifidianana:
Ny Koba isan-karazany
ny lalao na dia tsy manome soso-kevitra fanampiny, fa ny anarana sy ny endriky ny zavatra na ny vokatra takiana, noho izany, mba hanomanana azy ireo, dia mila nandinika tsara fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana, mpantsaka, harona. Ary raha isika izao eo amin'ny lalao ho an'ny zazavavy ny fanomanana sakafo ary na amin'ny fotoana voafetra - Mitaky manokana: dia ilaina ny manana fotoana mba hamita ny dingana rehetra amin'ny fotoana, raha tsy izany dia tsy maintsy manomboka indray. Misy ihany koa ny lalao ara-toekarena Cooking. Izy ireo mpilalao "miasa" ao an-dakozia orinasa sakafo karakaraina, dia mandray baiko izay mila haingana sy araka ny marina hanao. Toy izany lalao manolotra ny mahandro sakafo ho an'ny burgernyh, cafeterias, trano fisakafoanana. Matetika indrindra dingana fandrahoan-tsakafo no notsorina: ohatra, hanaovana lasopy legioma ampy mba hanapaka sy soak ny vilany eo amin'ny afo fotoana mety.
lalao ho an'ny ankizivavy sasany mba hanomana sakafo tsy mitaky, fanatitra Gamers ihany no tarehy ny efa nanendy mofo, muffins, donuts. Afaka hanarona ny loko powdering, hanovozana sokola poti, voankazo. In-boly hafa nanolotra ihany no manao dingana iray ny fanomanana - ohatra, mba hanapaka iray tapa maro ho voafetra fisaka shortcake biscuit koba teo. Play Lalao for Girls Cooking sakafo azonao atao ato amin'ity fizarana ity ny toerana.
izao tontolo izao inexorably ny ordinatera. Ao amin'ny aterineto no nafindra endrika saika rehetra - mampiaraka, fisakaizana, ny fifandraisana, ny asa, fianarana. Ny ankamaroan'ireo lalao birao taloha namany dia hita ao amin'ny ny tontolo virtoaly. Card Games - ny adala, Poker - ambin 'ny daomy, mahjong, Puzzles nofonosiny - fa efa tsy mila mpiara-miasa sy ny fitaovana miaraka amin'ny poti-sy ny karatra. Ampy solosaina amin'ny fahafahana miditra amin'ny aterineto. Miaraka amin'ny lalao toy izany dia nahazo bebe kokoa ny lazan'ny simulations ny zava-misy isan-karazany. Mandresy lahatra ny ankizivavy virtoaly mba handeha eo amin'ny daty, maka odezhku saribakoly - izany rehetra izany ankehitriny misy ao amin'ny lalao endrika ao amin'ny maneran-tambajotra. Ary koa ny handrahoana sakafo matsiro isan-karazany ny sakafo. Games ho an'ny tovovavy ihany handrahoana sakafo ahitana ny antony izay lalao ho an'ny ankizilahy manome isan-karazany ny foko, mpitifitra sy ny asa. Na dia ny fifantenana ny sakafo sy ny mitambatra, amin 'ny fitsipika, mba ho liana amin'ny sy ny solontenan'ny ny matanjaka firaisana ara-nofo. Rehefa dinihina tokoa, dia niezaka ny mpandraharaha mba hahatonga ireo kilalao maro loko indrindra sy mahafinaritra. Jobs in ireo dia tena samihafa - afaka mahandro ny omelet ho trite sy lovia firenena. Fandrahoan-tsakafo lalao an-tserasera manolotra tena isan-karazany ny fomba fanamboarana. Afaka mahandro sakafo toy ny trite omelette izay miandry antsika ao an-dakozia saika isa-maraina, ary paty carbonara izany sy bolognese, National irlandey Snack ny hena sy ny ovy, shawarma, burgers sy ny maro hafa lovia. Be pitsiny ny fandrahoan-tsakafo, dingana dia miankina amin'ny endrika ny lalao. Ny sasany manana toro-hevitra somary tsipiriany - rehefa esorina amin'ny hafanana, ampio ny zava-manitra, rehefa ny filaminana izay manampy sakafo. Ao amin'ny hafa ny mifanohitra dia tokony ho mamorona sy ny hahatakatra ny tsipirian'ilay fandrahoan-tsakafo torontoronina lovia. Indraindray dia ilaina ny mahalala ny tena marina fomba fahandro, na ianareo dia hahazo Foana, ka handeha hitety ny lalao dia tsy hahomby. Matetika ny fanamby dia tsy ny marina ihany, fa koa ny fanomanana ny sakafo haingana. Efa nahatratra ny fotoana - dia very. Misaraka teny mendrika ny famolavolana ny sary. Lalao for mahandro sakafo, toy ny fitsipika, dia tena maro loko, ary tsara voatsoaka. Fa mpanakanto tsy misy ilaina ny mampiseho be dia be ny toerana sy ny lamina ny asa mahery fo. Matetika amin'ny fandrahoan-tsakafo mpanampy dia sariitatra litera ary na dia olo-malaza. Raha fintinina, ireo lalao dia tsy mankaleo sy ataotao, araka ny finoan'ny olona. Manana zest. Fa mba mankasitraka azy io, dia mila manana, fara fahakeliny, indray mandeha mba hilalao. Ohatra, eo amin'ny toerana www. lalao-lalao. fr. ua
Lalao mahandro sakafo - Yum!
Ny fahaizana mahandro ankehitriny dia lasa manan-danja kokoa aza, noho ny endriky ny semi-vita vokatra sy sakafo haingana trano fisakafoanana dia mihena efa ho lehibe na inona na inona ho toy ny zavakanto. Raha ny teo aloha mahandro sakafo an-trano raha misy olona afaka zara raha gaga, fa ankehitriny dia mety ho lasa tena hafakely. Ary izay tsy hitranga, dia manolotra lalao ho an'ny tovovavy mahandro sakafo, izay ahitana fomba fanamboarana format manan-tompo sy malaza.
Misakafo miverimberina haingana vilia leo. Fa ny tena mpandray vahiny foana hitady fomba isan-karazany ny sakafo ho an'ny latabatry ny an-trano, satria tsy mila mividy ny Cookbook - ny Internet toerana maro amin'ny fandrahoan-tsakafo, izay olona hizara ny toerana tena fomba fanamboarana ka naka fanahy. Ary avy eo misy fandrahoan-tsakafo lalao izay mampianatra ny tovovavy ny fototry ny fandrahoan-tsakafo, ôrdônansy.
Cooking dia tsy fandrahoan-tsakafo sy ny mahafinaritra fotsiny dingana izay afaka manao ny orinasa manontolo. Ao an-dakozia manjaka tena fety mahafinaritra rehefa mifandray amin'ny raharaha toy ny fianakaviana namana orinasa, na miaraka amin'ny olon-tiany. Ao amin'ny Mazava ho azy fa ny zava-mitranga tsy nampoizina misy fanapahan-kevitra, ary afaka mitondra kely foana ny fiovana, manome tsiro manokana ny hanim-py.
Fantaro ny fomba fahandro lovia vaovao
Ao amin'ny sokajy efa nanangona be dia be ny fomba fanamboarana samy hafa, fa ho toy lohahevitra ity dia afaka mampitombo mandrakizay - fiovana vaovao hiseho ny fotoana rehetra, dia manohy hampiany ho tonga avy mahaliana indrindra vilia. Fa afa-tsy izany, dia ho hitanao lalao eo amin'ny fampandrosoana ny raharaham-barotra, lasa ny tompon'ny toeram-pisakafoanana sy trano fisotroana kafe kely. Manolotra Lesona ho fiomanana:
Ny faharoa sakafo
Lalao amin'ny ara-toekarena fitongilanana
Ho mitsidika ny maoderina-dakozia, fitaovana amin'ny fitaovana isan-karazany: mixers, nanapaka milina, koba, mofo milina, lafaoro sy microwave, kafe milina, juicer sy ny hafa.
dia hanampy anao izahay tonga amin'ny fety iray latabatra sy mianatra mpanao an-idina hevitra ny firavaka ny vita vilia. Maimaim-poana tsy tapaka rehefa milalao lalao mahandro sakafo, gaga ny namanao ianao amin'ny hafahafa mahafinaritra ho an'ny Halloween rehefa manolotra ny mofo amin'ny cobwebs, hala, amin'ny endrika tykvochek, mofomamy amin'ny endrika matoatoa, tsy mahazatra molotov sy ny salady sakafo takatry ny saina.
Rehefa mianatra ny fomba fanamboarana mofo tsy mahazatra, satria tsy mofo iray noana ny olona. Hanomana mofo akondro amin'ampempam-boaloboka, voanjo, tongolo sy sakafo hafa, izay Ho lazaiko aminareo. Ny firenena voankazo tovovavy mahafinaritra aza mahandro ny lasopy ny frezy.
Ho tianao ny lesona amin'ny hafainganam-pandeha sy nanapaka ny sakafo, mahazo ny tanana, dia afaka mandamina ny fifaninanana ho an'ny Chef haingana indrindra.
Fanorenana ny culinary raharaham-barotra
Fanomanana ny sakafo, dia marobe ihany koa ny famokarana, dia hanana ny fahafahana hanorina ny tambajotra ny andrim-panjakana ho amin'ny fanomanana sy ny fivarotana ny burgers, salady, mofo, gilasy sy ny zava-pisotro. Ao amin'ny andian Papa Nanokatra ny Lalao be dia be ny foto-drafitrasa mba hifanaraka tiany rehetra. Dia mivarotra muffins, ny pizza, mafana alika, akoho tongony, manomana paty bakes pancakes sy ny maro hafa.
Aza haingana toy ambadiky ny workaholic, ny Papa sy ny hafa anjara: SpongeBob, Mickey Mouse niaraka tamin'ny sipany Minnie, zaza i Hazel, Dora, tezitra vorona, Pou, Barbie, Bloom sy ny maro hafa mahery fo no ankasitrahana eo amin'ny sehatry ny culinary fahaiza-manao. Ny olona rehetra Miezaka ny hitondra ny famoronana ny karazana poignancy, manolotra ny vokatry santionan'ny sangan'asa amin'ny mpanjifa.
, raha tombony voalohany, dia aoka mba hividy fitaovana vaovao, vokatra sy fitaovana ho an'ny ny efitrano. Isaky ny mandalo dingana manatona izao harena izao ianareo sy hahazo fanekena ny mpanjifa.